Allgedo.com » 2017 » September
Home » Archive Montly September, 2017
Ugaas Maxamed Xasan Yarow oo ku dhalliley Madaxweynaha Jubbaland inuu kaga baxay balan qadyo xilligii uu ku sugnaa Gobolka Gedo (Dhageyso Wareysi)
Ugaas Maxamed Ugaas XasanYarow oo ka mid ah Hogaamiyayaasha dhaqanka Gobolka Gedo ayaa ku dhaliiley Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe in uu kaga baxay balanqaadyo uu la galey Odoyaasha dhaqanka Gobolka, xilli dhowaan Odoyaasha iyo waxgarad kale kulan ay kula qaateen degmada Dolow ee Gobolka Gedo. Ugaas Maxamed oo u wareysi siiyey Warbaahinta ayaa tilmaamay Balanqaadyada uu uga baxay Madaxweyne...
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Boqorka iyo Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sucuudi Carabiya (Sawirro)
Jeddah, Sebtembar 27, 2017: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo safar shaqo ku jooga Boqortooyada Sucuudi Carabiya, ayaa maanta la kulmay Boqor Salmaan Bin Cabdi Casiis. Madaxweynaha oo qado sharaf loogu sameeyay Qasriga Nabadda ee magaalada Jeddah ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ka qeybgalay Amiirro iyo Wasiirro ka tirsan Boqortooyada Sucuudiga. Madaxweynaha...
Faah-faahin dagaalkii maanta ka dhacay gudaha magaalada Balad-Xaawo ee gobolka Gedo
Dagaalkii maanta ka dhacay gudaha magaalada Balad-xaawo ayaa waxaa ka dhashay qasaare lixaad leh oo isugu jira naf iyo maal. Waxaa la sheegayaa in dagaalka oo ay maleeshiyada Al-shabaab kusoo qaadeen gudaha magaalada Balad-xaawo aroornimadii hore ee maanta, abaare 5 am subaxnimo ay ku dhinteen tiro kor u dhaafeysa ilaa 20 qof oo u badan ciidankii amniga degmada Balad-xaawo. Dhaawaca ayaa la sheegayaa...
Dagaal xoogan oo ka socda gudaha magaalada Balad-Xaawo ee gobolka Gedo
Gudaha magaalada Balad-Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxaa hadda ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya xoogagga Al-Shabaab iyo ciidamadii amniga degmada ee halkaas ku sugnaa. Dagaalka ayaa waxuu ku bilowday kaddib markii maleeshiyada Al-shabaab ay weerar gaadmo ah magaalada kusoo qaadeen aroornimadii hore ee maanta oo Isniin ah. Dagaalka oo ilaa iyo saacaddaan la joogo oo uu waqtiga Balad-xaawo yahay...
Muqdisho; September 9, 2017 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeer ku tagay Dugsiga tababarka ciidamada ee Jeneraal Goordan ee magaalada Muqdisho. Cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa halkaas salaan sharaf ku siiyey Madaxweynaha. Sidoo kale, Saraakiisha Soomaaliyeed ee tababarka ka bixiya dugsigaan ayaa Madaxweynuhu la yeeshay kulan...